Ity no mailaka nalefan'i Apple ho an'ireo izay efa lany ny taona tsy andoavan'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Maro aminareo no mitovy amin'ny toe-javatra misy ahy, miaraka amin'ny Apple TV + fe-potoana malalaka efa ho tapitra. Amin'io lafiny io, nankafy taona iray maimaimpoana tamin'ny serivisy Apple izahay ary tonga izao ny fotoana diniho raha mendrika na tsia ny fandoavana isam-bolana € 4,99 isam-bolana.
Amin'ity dia tsy te-hitaona olona isika, malalaka ny tsirairay hanao izay tiany sy eritreretiny araka ny itiavany azy saingy toa tsy mijanona amin'ity serivisy ity ny première izay natomboka tamina votoaty kely fa tsikelikely tsy mitsahatra manampy andian-tantara, sarimihetsika, fanadihadiana, sns..
Ilay mailaka handefasan'i Apple anay Mba hampitandremana fa lany tolotra maimaimpoana isika dia izao:
Manantena izahay fa mankafy ny fidirana malalaka amin'ny Apple TV + ianao. Manomboka amin'ny 27 Jolay, ny fanafoanana anao dia hanavao ho azy ny 4,99 € / volana.
Apple TV + no sehatra manana atiny voalohany misy naoty ambony indrindra amin'ny serivisy streaming rehetra *. Efa akaiky ny fizarana vaovao amin'ity andiany nahazo loka ity:
Ted lasso: Hatsikana mandresy safidy safidy mpitsikera an'i Jason Sudeikis - vanim-potoana fizarana faharoa amin'ny 23 jolay.
The Morning Show: Tantara an-tsary nandresen'i Emmy® an'i starring Jennifer Aniston sy Reese Witherspoon - ny fizarana faharoa dia manomboka amin'ny 17 septambra.
jereo: tantara an-tsehatra dystopianan'i Jason Momoa - fizarana fizarana faharoa amin'ny 27 aogositra.
Hatao ambara ny fahamarinana: Andiam-pandresena nahazo loka NAACP® sary nahazo an'i Octavia Spencer sy Kate Hudson - fizarana fizarana faharoa amin'ny 20 aogositra.
Snoopy seho: Adventures vaovao miaraka amin'ny alika malaza indrindra eto an-tany - fizarana vaovao tonga tamin'ny 9 jolay.
Ho fanampin'izay, tsy ho ela ianao dia afaka mankafy atiny vaovao, manomboka amin'ny tantara an-tsehatra, hatsikana ary fandaharana ho an'ny ankizy ka hatramin'ny sasany amin'ireo sary mihetsika tsara indrindra:
Andriamatoa corman: starring Emmy® mpandresy Joseph Gordon-Levitt - ny andiany premieres amin'ny 6 Aogositra.
fototra: mifototra amin'ireo tantara novonoin'i Isaac Asimov nahazo loka - ny andiany premieres amin'ny 24 septambra.
Ny olana amin'i Jon Stewart: ny fiverenana nandrasana hatry ny ela tamin'ny fahitalavitra amin'ity kintana alina ity - Ho avy tsy ho ela.
Ny vavahady manaraka: starring Will Ferrell and Paul Rudd -Premieres ny andiany amin'ny 12 Novambra.
Greyhound: fahavalo ambanin'ny ranomasina: Sarimihetsika natolotry ny loka Award Academy dia an'i Tom Hanks - ankehitriny streaming.
Ankafizo izany atiny rehetra izany amin'ny fampiharana Apple TV, hita amin'ny iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K sy HD, Roku, Amazon Fire TV ary Chromecast miaraka amin'ny Google TV, ary koa amin'ny fahitalavitra marani-tsaina avy amin'ny Samsung, LG, Sony, Android ary Vizio , amin'ny PlayStation®, Xbox ary amin'ny tv.apple.com. Apple TV + tsy misy doka ary ny fizarana dia azo zaraina amin'ireo mpianakavy 6.
Mba hisorohana ny fiampangana dia mila manafoana iray andro farafahakeliny ianao alohan'ny datin'ny fanavaozana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa na hanafoanana dia jereo ny famandrihanao.
Ankafizo ny atiny,
Ny ekipa Apple TV +
Nanavao ve ianao sa tsia?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ity no mailaka nalefan'i Apple ho an'ireo izay nahavita ny taona maimaim-poana amin'ny Apple TV +